Nielsen mampitaha paoma amin'ny voasary, Podcasting amin'ny bilaogy | Martech Zone
Alakamisy, Jolay 13, 2006 Talata, Jolay 4, 2017 Douglas Karr
Toy ny fidirako teo aloha ao amin'ny 'fantsona' mameno amin'ny internet, dia mahagaga ahy foana rehefa mitsangana ireo olona milaza ho manam-pahaizana ary milaza zavatra tena hadalana. Nielsen vao haingana no namoaka ny fampitahana ny mpampiasa Podcast amin'ny Blogging. Fampitahana hafahafa be ity. Mpampiasa Podcast dia mpanjifa, ary mpitoraka bilaogy no mpamatsy. Ahoana no ifandraisan'izy ireo eto amin'izao tontolo izao? Satria samy mampiasa internet? Ohatra iray hafa amin'ny tsy fananan'ny media mahazatra fampahalalana…
Amin'ny fanamarihana mitovy amin'izany, nahazo fanamarihana tamin'ny Bilaogin'i Seth taorian'ny fifanakalozan-kevitra momba ny lalàna tsy miovaova izay an'ny ABC (Bureau Bureau of Circulation) izay ahafahan'ny gazety mahazo isa tsara kokoa raha mbola mitohy ny fivezivezena fitontonganan'ny.
Tags: biraon'ny fanodinanany mpamaham-bolonganafihenan'ny gazetyfamoahana podcastmpampiasa podcastPublishingseth godin
Mar 21, 2007 amin'ny 4: 40 AM
Heveriko fa ilaina ny fanazavana momba ny fanehoan-kevitry ny paoma. Eny, mandritra mpihaino amin'ny podcast dia mpanjifa, ary mpanoratra ny bilaogy dia mpamokatra, tsy marina koa ve ny mpamorona amin'ny podcast ve ny mpamokatra? Raha mitombina ity lozika ity (ary heveriko fa marina izany) dia fampitahana Nielsen mifototra amin'ny karazana mpamokatra, na karazana mpanjifa samihafa no toa mety. Niaiky aho fa tsy mbola nahita ny fikarohana nataon'ny Nielsen izay noresahinao, saingy miahiahy aho fa tsy nifamatotra araka ny nolazainao ny fampitahan'izy ireo. Eny, ny haino aman-jery mahazatra matetika dia tsy mahazo izany raha ny momba ny atiny atolotra amin'ny Internet, saingy heveriko fa amin'ity tranga ity dia henjana loatra ny fitsikeranao.
Mar 21, 2007 amin'ny 6: 52 AM
Misy rohy mankany amin'ilay Nielsen lahatsoratra ao amin'ny lahatsoratra. Ity misy sombiny iray: “Betsaka ny olona no naka podcast tato ho ato noho ny namoaka bilaogy na niditra amin'ny fiarahana tamin'ny Internet, araka ny fanadihadiana vaovao nataon'i Nielsen // NetRatings.”
Mijoro eo akaikin'ny paoma amin'ny voasary aho… fampitahana tsy misy dikany io. Mankasitraka anao tokoa ny nijanonanao sy ny hevitro! Azoko antoka fa hahita fampitahana mahatsiravina taonina eo amin'ny tranokala noho Nielsen ianao. 🙂